Maitiro ekuisa alarm pa iPhone yangu | IPhone nhau
Maitiro ekuisa alarm pa iPhone yangu
Pandakaziva kuti kune zvakawanda zvakatsvaga pa iPhone News zvine chekuita ne kuisa sei alarm pane yangu iPhone, Ndakashamisika. Kwandiri, iOS ndiyo intuitive system yandave ndichishandisa kwemakore akati wandei, saka izvi zvinoita sezviri pachena kwandiri, asi ndinogona kunzwisisa kuti havazi vese vanowirirana pamwe neIOS sezvandinoita. Nekudaro, ini ndichaenda kunotsanangura matanho ari nyore atinozoteedzera kumisikidza alarm nenzira mbiri dzakasiyana, pamwe nekumisikidza kudzokorora uye kutiratidza rugwaro.
Kuisa alarm pa iPhone tinofanirwa kushandisa pfungwa. Ndeupi mudziyo watinowanzoisa maaramu? Pamawachi. iOS ine Clock app izvo, pamusoro pewachiwachi, nguva yepasi uye timer, inogona, kutaura zvazviri, kurira panguva yatinoikumbira. Kuti umise alamu nemaoko, unofanirwa kutevedzera nhanho dzaunenge uine mushure mekusvetuka.
1 Maitiro ekuisa alamu nemaoko
2 Maitiro ekuisa alarm ne Siri
Maitiro ekuisa alamu nemaoko
Maitiro ekuisa alarm pa iPhone.
Tiri kuenda Alarm.
Isu tinobata pane chiratidzo che Wedzera (+).
Tinofambisa nguva kusvika tasvika pane yatiri kuda kuziviswa. Kurutivi rworuboshwe runopururudza maawa uye kurudyi runopuruzira maminetsi.
Takatamba pa muchengeti.
Inesarudzo: kana isu tichida kuisa chinyorwa, tichaisa zvinyorwa mu «Label» kuti tinoda kuratidzwa. Tinogona zvakare kusarudza ruzha, kusanganisira rwiyo, rwunotiratidza sarudzo yekumbomira kuitira kuti iridze zvakare gare gare uye kana tichida kuti ridzokororwe pane mamwe mazuva. Kuzvidzokorora, isu tinongomaka zuva revhiki ratiri kuti riridze nekutepa pariri.
Maitiro ekuisa alarm ne Siri
Seta alarm ine Siri
Zvese zviri pamusoro zvinogona kuve nyore zvakanyanya nekutenda kuna Siri. Kana isu tichida kuseta alarm, isu tinongofanirwa kuudza Siri, semuenzaniso, "Alarm mangwana na10 am" uye ichaisa yakananga alarm yenguva yatakumbira. Asi, kana, sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, tinokukumbira kuti usete alarm ine chinyorwa chakatarwa. Semuenzaniso, kana tikati "seta iPhone yazvino aramu na8: 30" icharira alarm ine chinyorwa, senge iri mumufananidzo pakutanga kwechinyorwa.
Sechimwe chidimbu cheruzivo, sezvo isu tiri kutaura nezve wachi uye yambiro, kana tikashandisa iyo timer, tinogona kuimisa kuti imise mimhanzi pakupera kwekuverenga, izvo zvakanaka kuti usarara uye kuti mimhanzi iri kutamba kwenguva yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa alarm pa iPhone yangu
Iyi posvo yakapusa sei ...
Pindura kuna AZTOR
Ikozvino pane imwe posvo yemabatiro ekusimudza uye kudzikisa vhoriyamu pane iyo iPhone uye isu tine hutsinye uye hunoshanda bhuku ...
Ingwavaira yakadii ... tiri kuramba tichiwedzera.
Tuca moton akadaro
Pindura Tuca Moton
Ivo vanhu vasingazive maitiro ekuita chero eizvozvo havazive kupinda iyi blog kana kuti iripo
Ini handinzwisise zvakataurwa zvisizvo, zvirokwazvo izvo zvinhu zvatinoziva asi hazvina kuipa kuyeuka uye zvirokwazvo kune vanhu vanogara vakunakira ...
Kana ini handifunge kuti zvakanyanya kunaka kutaura kunobatsira zvakanyanya….
Basa revapepeti rinofanirwa kukosheswa
Pindura kuva avegalf
Mhoroi, avegalf 😉 ndinozvinzwisisa, asi hongu ini handigovane. Aya ma tutorials, anoita kunge akareruka kune vazhinji vedu, akagadzirwa nekuti anotsvaga. Zvinonzi vanhu vasingazive kuisa alarm havapinde ino blog kana kuziva kuti iripo, asi zvinoshamisa kuti pane tsvakiridzo dzerudzi urwu dzakanyoreswa.
Ichi chinyorwa / dzidziso ichave yakapusa sekutenda kwe90%, asi iri mhinduro kune izvo zvekutsvaga.
Iyo tontuna yezuva !!!!!
Zvakanaka, chinyorwa hachina kushata zvachose, pachave nevanochinakira uye pachave nevaya vasina. Asi kwandiri Apple inogona kuisa sarudzo yaSiri yekukuudza iwe zvinyorwa zvawanyora uye zviitiko, kugadzwa uye zviyeuchidzo zvaunazvo zvezuva irori (ngatiendei kune ajenda), kuwedzera kune ruzivo rwemamiriro ekunze, pamwe nekubatana zvakanyanya naSiri uye kwete kungomubvunza iye zvinhu. Izvi semuenzaniso, pachave nevaya vanozvitora sehurombe asi kana uchinge wajaira hafu yekurara unoziva nezve hurongwa hwako hwezuva, nekuti icho chinhu chiri kufamba mushe, unenge uchibudirira. Zvikasadaro iri rakazara kwazvo alarm app.
Pamberi peSamsung, iyo alarm app yaive yakadaro uye yakakuverengerawo misoro yenhau dzakakosha, sarudzo yekuti kuravira kwangu yanga isina basa, asi handizive kuti nei vakaibvisa kuSpain.
Saka iwe unogona kuseta alarm ine iyi sarudzo uye imwe ine yako yaunofarira rwiyo. Handizive kana mushanduro dzakapfuura dzeIOS dzakambovapo.
Ino ndiyo yakanyanya kunaka nguva yekudzidza maitiro ekugadzira maapps eIOS 9
Nhau dzakanaka: mutengo weiyo iPhone 6s hauzowedzere